थाहा खबर: नगर गुरुयोेजनाकै चरणमा छौँ : व्यास नगर प्रमुख न्यौपाने
नगर गुरुयोेजनाकै चरणमा छौँ : व्यास नगर प्रमुख न्यौपाने
तनहुँको व्यास नगरपालिकालाई मुलुकको प्रदेश ४ अन्तर्गत तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम दमौलीको नामले पनि चिनिन्छ। व्यास नगरपालिकाको पूर्वमा भानु नगरपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिका, पश्चिममा म्याग्दे गाउँपालिका र शुक्लागण्डकी नगरपालिका, उत्तरमा लमजुङ र कास्की जिल्ला तथा ऋषिङ र देवघाट गाउँपालिका पर्दछन्। नगरको वडा २, ३ र ४ मा शहरी क्षेत्र, १, ५ र १० माअर्ध शहरी क्षेत्र र बाँकी नाै वडाहरू भने ग्रामीण क्षेत्रमा पर्दछन्।
यस नगरपालिकामा मगर, बाहुन, क्षत्री, गुरुङ, दरै, नेवार, कामी, सार्की, मुस्लिम, घर्ती भुजेल, ठकुरी, कुमाल, बोटे, संन्यासी, दुरालगायतका जातिहरूको बसोबास छ। दरै जातिको उद्गमस्थलसमेत मानिने यहाँ चुड्का, घाटु, कौरा, झ्याउरे, परम्परागत तीजका गीत तथा नृत्यहरू लोकप्रिय संस्कृतिहरू हुन्।
घुटुक्दी बराह, निर्वु बराह, चम्रे ओडार, व्यास गुफा, शिवपाञ्चायन मन्दिर, पराशर गुफा, अनन्त गुफा, तनहुँ कालिका, भानुघाँसी स्मारक पार्क,व्यास नगरपालिकामा रहेका प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरू हुन्। व्यास नगरपालिका तनहुँको पुरानो नगरपालिका हो। व्यास नगरपालिकामै सेती र मादी नदीको पवित्र संगमस्थल महर्षि वेद व्यास र पराशरको तपोभूमि (कर्म क्षेत्र) पनि पर्दछ।
व्यास नगरपालिकाका नगर प्रमुख वैकुण्ठनाथ न्यौपानेसँग नगरको वस्तुस्थिति, विकास निर्माणका काम र नगरको समृद्धिबारे थाहा खबरका तनहुँ संवाददाता मिला दरैले गरेको कुराकानी :
तपाईंको पृष्ठभूमिबारे आफैँ बताइदिनुहोस् न।
म तनहुँमै जन्मेको हुँ। मेरो बाल्यकाल सामान्य अवस्थामै बित्यो। मैले त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट एमए, नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुन विषयमा स्‍नातक र त्रिविबाट एकवर्षे बिएड गरेँ। विद्यार्थी जीवनमै (२०३७/०३८ ) काठमाडौँ तनहुँ सम्पर्क समाजको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेँ। ०३९/४० मा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष भएँ।
०४९ मा कांग्रेस व्यास नगरपालिकाको सभापति, ०५४ देखि जिल्ला सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य हुँदै ०७२ माघदेखि जिल्ला पार्टी सभापतिको रूपमा कांग्रेसको नेतृत्व सम्हाल्दै आइरहेको छु।
अर्कातिर ०४० देखि नै कानुन व्यवसायलाई पनि अँगालेँ। ०४७ देखि लायन्स क्लब र रोटरी क्लब अफ दमौलीको संस्थापक सदस्य बनेर सामाजिक सेवामा पनि लागेको छु। ०३४ मा जनजुक्त शाही माध्यमिक विद्यालय स्थापनाको अभियानमा लागेँ। ०३६ देखि नै केही समय अध्यापन पनि गरेँ। त्यस्तै, ०४७ देखि आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा प्रध्यापन सुरु गरेँ। ०४८ देखि ०७१ असारसम्म क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेँ। अहिले व्यास नगरपालिकाको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएकाे छु।
स्थानीय तहको नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएको १० महिना बितिसक्यो, नगरपालिका विकासमा के कस्ता कामलाई प्राथमिकतामा राख्‍नुभएको छ?
अहिलेसम्म हामी विगतका वर्षहरूमा पास गरेका योजनाहरूमै अल्मलिएका छाैँ। अहिलेको प्राथमिकता भनेको नगरपालिकाको ऐन निर्माणको चरण हो। नगरपालिकाको विकासका लागि विभिन्न खाले गुरुयोजना निर्माण गर्ने कार्यमा अगाडि बढिरहेका छौँ। गर्न सक्ने कामहरू भने दैनिक रूपमा गरिरहेका नै छाैँ। ऐन कानुन निर्माण भएपछि विकास निर्माणका कामहरू पनि अगाडि बढाउछौँ।
चुनावी एजेन्‍डाअनुसार नै काम भइरहेकाे छ त?
जनतालाई सहज सेवा पुर्‍याउनु नगरको प्रमुख प्राथमिकता हो। हामी अाफूले गरेका प्रतिबद्धताअनुसारको योजनामा लागिरहेकाे छाैँ। अाफूले गरेका प्रतिबद्धताअनुरूप योजना निर्माणतर्फ अगाडि बढिरहेका छाैँ। प्रतिबद्धताभन्दा बाहिर गएका छैनौँ। हामी नगरका खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, विद्युत्लगायतका अत्यावश्यक आधारभूत विषयमा नै केन्द्रित हुनेछौँ। नगरवासीका समस्या समाधानमा नै केन्द्रित हुन्छौँ।
नगर विकासका लागि भने के के गर्दै हुनुहुन्छ?
नगरपालिकाको हिसाबमा केही प्रतिबद्धता छन्। मूलभूत रूपमा विकासको गुरुयोजना निर्माणको काममा लागिपरेका छाैँ। धार्मिक पर्यटकीय विकास अभियानको गुरुयोजनाकाे खाका तयार भइसकेको छ। फाइनल डकुमेन्ट तयार हुन बाँकी छ। शहरी बस्ती विकासमा पनि लागेका छाैँ। बस्ती विकासको योजनाअनुसार विभिन्न चरणहरू बनाएका छौँ। विशेष गरी मादी, सेती, बुल्दी, सांगे भ्यालीलाई विकसित गर्ने योजना बनाउँदैछाैँ।
नगर विकासका सन्दर्भमा दीर्घकालीन पक्षमा जोड दिएर अघि बढिरहेका छाैँ। भतेरी जग्गा अधिग्रहणका लागि सैद्धान्तिक सहमति भएअनुसार १० करोड विनियोजन गरिसकिएको छ। नगरका पार्क, चौतारा, खेलकुद मैदान तथा धार्मिक क्षेत्रहरूको विकास निर्माणतर्फमा पनि जुटेका छौँ।
नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन के कस्तो पहल गर्नुभएको छ?
नगरपालिकालाई समृद्धतर्फ लैजान नगरपालिकाभित्रका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक क्षेत्रकाे पहिचान खोजिरहेको छौँ। कला र संस्कृतिको विकास गर्दै व्यास तपोभूमिमा निर्माण हुन लागेको १०८ फिट अग्लो व्यास ऋषिको मूर्ति निर्माण गर्ने अभियानमा लागेका छाैँ। त्यस्तै, पर्यटकीय मानुङलाई विकास गर्नमा १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। मानुङ डाँडामा पिच हुँदैछ। नगरपालिकाभित्रका सबै वडामा पिच गर्ने अभियान यो वर्षबाट सुरु हुन्छ। व्यासको मूर्ति निर्माणका लागि १० लाख विनियोजन गरिएको छ। गुरुयोजना निर्माण भइनसकेको हुँदा पछि आवश्यक बजेट थप्नेछौँ।
नगरपालिकामा के कस्ता प्रमुख समस्या छन्, त्यसको समाधानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ?
याे नगरपालिकामा प्रमुख समस्या खानेपानीको छ। त्यसको समाधानका लागि खानेपानीको मुहान पहिचान गरी पानी लिफ्टिङको काम भइरहेको छ। मादी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिमा जडान गर्ने काम गर्दै छाैँ। काम सम्पन्न भएपछि नगरवासीलाई २४सै घण्टा खानेपानी पुर्‍याउनेछाैँ। नगरको ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयका समस्या पहिचानका लागि सर्वेक्षण गरिरहेका छौँ। अाउँदाे वर्षदेखि सर्वेक्षणबाट पहिचान गरिएका समस्याकाे समाधानतर्फ लाग्ने याेजना छ।
तपाईंको कार्यकाल अवधिभरमा नगरपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना बनाउनुभएको छ?
व्यास नगरपालिकालाई समृद्ध नगरको रुपमा स्थापित गर्ने हाम्रो योजना छ। प्रतिबद्धता छ। यसका लागि फुलै फुलको नगर बनाउने योजनामा छौँ। अव उच्च शिक्षाका लागि नगरपालिकाबाट बाहिर जानुपर्दैन। राम्रा राम्रा स्कूल, क्याम्पस शिक्षालयहरू नगरपालिकाभित्रै खुलेका छन्। व्यास, पराशर, छाब्दी बाराही लगायतका धार्मिकस्थलको विकास गरेर पर्यटकीय धार्मिक क्षेत्र बनाउने याेजना पनि बनाएका छाैँ।
नगरवासीको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ?
अहिलेसम्म गरेका काममा नगरवासीबाट सन्तोषजनक प्रतिक्रिया पाएको छु। जिल्लाको सदरमुकाम र पृथ्वी राजमार्गको मध्य भागमा पर्ने चार लेनको सडक निर्माण हुँदै छ। सडक आसपासका घर, टहरा भत्काउने कार्य सुरु गरिनेछ। साथै सडक निर्माण कार्यलाई पनि तिव्रता दिइनेछ।